Shan Siyaabood oo Hubaal ah oo lagu Kordhin karo isbadalladaada Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Khamiis, Agoosto 2, 2018 Khamiis, Agoosto 2, 2018 Rekha pant
Waxay u socotaa iyada oo aan la sheegin in habka ugu wax ku oolka badan ee lagu gaari karo loona abuuri karo xiriir shucuur leh macaamiisha suurtagalka ah waa warbaahinta bulshada. Mid ayaa ka heli kara balaayiin isticmaaleyaal ah barnaamijyada kala duwan ee warbaahinta bulshada; waxay noqon laheyd qashin aad u weyn in laga faa'iideysan waayo fursadan cajiibka ah. Maalmahan waa wax walba oo ku saabsan rabitaanka in la arko, la maqlo, oo la dareemo, taas oo ah sababta ugu dhow qof walba u aado xisaabaadkiisa si uu u sii daayo fekerkiisa.
Mid waa inuu si buuxda u fahmaa barnaamijyadan warbaahinta bulshada si ay ula yimaadaan istiraatiijiyad kor u qaadi doonta beddelaadda. Waxay noqon kartaa mid aad u jahwareersan bilowga maxaa yeelay waqti ayey ku qaadataa in natiijooyinka la filayo ay soo baxaan. Dariiqa kaliya ee lagu tagi karo waa iyada oo la darso sida ay barnaamijyadu u shaqeeyaan isla markaana ula yimaadaan qorshe la taaban karo ka hor inta aan kumanaan kun oo doollar lagu bixin ololeyaal ay hubaal tahay inay fashilmi doonaan
Dunida khadka tooska ah waxaa ka buuxa macluumaad ku saabsan sida loo kobciyo taraafikada baraha bulshada iyo is-beddelka laakiin marka la arko sida kuwani ugu badnaan karaan dadka, waxaan ku soo koobnay shan. Aynu bilowno kubbadda rogid:
La ciyaar Muuqaalka
Waxaa jira caqli-gal ah oo ka dambeeya ereyga, "sawir wuxuu sawirayaa kun eray". Wax walba si dhakhso leh ayey ku socdaan maalmahan dadku dadku marki dambe uma yeeshaan dulqaad ay ku dhammaystiraan akhrinta qormo dheer. Waxay rabaan si dhakhso leh, hal dariiqo oo tan lagu sameeyona waa iyada oo loo marayo muuqaallo. Infographics, bandhigyo, fiidiyowyo, sawirro ayaa la caddeeyey inay helayaan qiyaas dhan 94% aragtiyo dheeri ah iyo wadaag marka loo barbar dhigo waxyaabaha leh muuqaallo eber ah. Ma ogtahay waxa ka sahlan ee muuqaalka maalmahan? Waxaad ubaahantahay inaadan noqonin pro iyo waxaad un abuurikartaa iyaga oo kaashanaya qalabka muuqaalka tooska ah. Muuqaalada sidoo kale waxtar ayey u leeyihiin helitaanka dareenka isticmaaleha internetka, taas oo ah waxa barta dhan ay ku saabsan tahay.
Qayb ka mid ah abuuritaanka nuxur u qalma gujinta badhanka wadaagga ayaa tilmaamaya cidda bartilmaameedku yahay. Noocyo kala duwan oo ereyo ah ayaa soo jiita dadka ka kala yimid da 'kala duwan, xirfado, iyo danaha, taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la ogaado shaqsiyaddan. Dadku waxay leeyihiin meelo jilicsan oo meherado ah oo ay la macaamili karaan, hal dariiqo oo taas lagu samayn karaa waa iyagoo ku hadlaya afkooda. Si qoto dheer fahamka dhagaystayaasha ayaa ah, sida ugu fudud ee ay noqon doonto in la abuuro waxyaabo tayo sare leh, wadaagna u qalma.
Layaabka Taageerada Macaamiisha
Helitaanka dareenka macaamilka waa hal shay, laakiin ogaanshaha inay jiraan dad diyaar u ah inay caawiyaan oo wax ka qabtaan tabashooyinkooda ayaa ah mid ka mid ah hababka dabka-hubinta ee lagu heli karo beddelaad. Waxaa jira adeegyo fara badan oo fariin ah oo u oggolaanaya ganacsiyada inay ku xirmaan dhagaystayaashooda khadka tooska ah heer shakhsi ah. Dadku si fudud ayey u damiyaan marka su'aalahooda aan laga jawaabin taasi waa sababta ay ugu doorbidaan shirkadaha runtii waqtiga qaata inay ka jawaabaan weydiimahooda. Waxaa jira ikhtiyaarro si otomaatig ah looga jawaabo, mid waa inuu taxaddar yeeshaa marka aad u socoto habkan maxaa yeelay wuxuu kaloo iska celin karaa macmiilka gaar ahaan marka jawaabaha aan la shakhsiyeyn ama u muuqan sidii inay ka imaanayaan mashiin.
Riixida batoonada saxda ah
Beddelaaddu waxay si toos ah ugu xiran yihiin badhannada wicitaan-ka-fal. Si kasta oo ay u qurux badan tahay nuxurka, haddii macaamilka suurtagalka ahi aanu heli karin badhanka wicitaanka-ficilka, beddelaaddu ma dhici doonto. Badhannadani waxay si dhakhso leh ula socdaan macaamil ammaan ah oo aan kala go 'lahayn, ha ahaato wax fudud sida tegitaanka shirkadda websaydhka ama iibsashada wax soo saar. Nidaam u baahan tillaabooyin badan ayaa lagu ogaan karaa hal guji oo kaliya taas oo ah sababta ay badhannadani ugu habboon yihiin xagga sare ee liiska mudnaanta marka ay la imaanayaan istiraatiijiyadda ololaha warbaahinta bulshada.
Baro Waxa La Yidhaahdo
Hal dariiqo oo istiraatiiji ah oo lagu kala sarreeyo qaybta sare ee natiijooyinka raadinta waa iyadoo la adeegsanayo ereyada muhiimka ah ee saxda ah. Kuwani waxay gacan ka geystaan ​​kobcinta qiimeynta raadinta websaydhka, waana cunsur muhiim u ah xayeysiinta raadinta lacag bixinta. Xaaladda ku jirta: hashtags. Kuwani waxay muhiim u yihiin sameynta waxyaabaha muuqda maxaa yeelay waxay soo jiitaan kuwa raacsan iyo kuwa aan raacsaneyn, marka lagu daro waxay u horseedi karaan macaamiisha mustaqbalka bogga shirkadda oo ay soo iibsadaan wax soo saar.
Kordhinta beddelaadku waxay ku saabsan yihiin is-waafajin, faham qoto dheer oo ku saabsan barxadda warbaahinta bulshada, aqoonsashada cidda bartilmaameedku yahay, iyo ogaanshaha ereyada ama sawirrada la adeegsanayo. Dadku way deg deg badan yihiin inay la wadaagaan waxyaabaha ay la xidhiidhi karaan, sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan in lagu daro waxyaabo bini-aadam ama shucuur leh. U kaxee iyaga fuul.
Tags: isbeddelkawarbaahinta bulshadasawirada